I-Sony Xperia 1: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | Iindaba zeGajethi
U-Sony uququzelele umsitho wentetho ngale ntsasa kwi-MWC 2019. Kuyo, umenzi othandwayo usishiye nee-smartphones ezininzi. Eyokuqala kubo yile Sony Xperia 1, Imodeli yayo entsha yokuphela okuphezulu. Ifowuni eza negama elitsha, kuba uphawu luye lwagqiba ekubeni luthiye ngokutsha uluhlu lwazo lwee-smartphones zalo nyaka. Inzame entsha yokuqalisa kwakhona ukuthengiswa kwezixhobo zayo.
Le Sony Xperia 1 ime ngokukodwa kwiscreen sayo, nge-21: 9 ratio. I-brand iyanciphisile imiphetho ukuya kwelona liphezulu, ukongeza ekwandiseni isikrini. Inikwe njenge-smartphone efanelekileyo yokusebenzisa umxholo wemultimedia. Yintoni enye esinokuyilindela kwesi siphelo siphezulu?
Njengoko sibona kwezinye iimodeli eziboniswe kwi-MWC 2019, iza neyona processor inamandla kwintengiso. Ukongeza, sifumana ikhamera yangemva kathathu kwisixhobo, phakathi kwezinye izinto. Yonke into oyifunayo kwisiphelo esiphakamileyo sangoku kwi-Android. Ngaba iya kunceda ukubuyisela uSony encotsheni yentengiso?
2 I-Sony Xperia 1: Intsha entsha yoluhlu
Isikrini siyinto ebalulekileyo kwesi sizukulwana sitsha see-smartphones zeSony. I-Sony Xperia 1 ifika nepaneli ye-OLED, kunye nale 21: 9 ratio, ethi ngokwenkampani ikuvumela ukuba ujonge umxholo kwaye usebenzise iiapps ngesiqhelo. Imixholo emininzi kumaqonga anjengeNetflix sele inayo le fomathi, okanye inkxaso. Ke inokwenzeka. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
Isony yenye yezona zinto zimbalwa isenokungasebenzisi inotshi okanye umngxunya kwizikrini kwiifowuni zabo. Ngelixa uninzi lweemveliso ze-Android, kubandakanya i-Samsung, sele zisungule imodeli, amaJapan agcina imigca yoyilo kwii-smartphones zawo, nangona etshintshe kakhulu umlinganiso wale divayisi.
Umsindo yenye into ebalulekileyo kwifowuni. I-Sony Xperia 1 iza nezithethi zestereo, ukongeza ekubeni nayo Inkxaso kumgangatho weDolby Atmos. Ndiyabulela koku, kuya kuba nakho ukonwabela isandi sokuntywila xa usitya umxholo kwisixhobo. Kwakhona, bafuna ukugxininisa ukuba yi-smartphone entle xa kusenziwa ukubukela iividiyo, uthotho okanye ukumamela umculo kuyo.
I-Sony Xperia 1: Intsha entsha yoluhlu
Ngaphakathi kwifowuni yeyona processor inamandla ye-Android ngoku silindelwe, i-Snapdragon 855. Ngokungafaniyo nezinye iifowuni ezithiwe thaca kwi-MWC 2019 kusetyenziswa le processor, Ifowuni yohlobo lwaseJapan ayifiki nenkxaso ye5G. Akukho nto ikhankanyiweyo malunga nokufika kwe5G kwizixhobo zebrendi kumsitho. Nangona kusaziwa ukuba inkampani isebenza kuyo.
Iikhamera yenye yamandla kule Sony Xperia 1. Iilensi ezintathu zangasemva, indibaniselwano yeengile, i-engile ebanzi kunye nefowuni, zonke ziyi-12 MP zizinto esizifumanayo. Ubukrelekrele bokwenziwa bukhona, ukunceda ukuphucula ukubonwa kwendawo, ukongeza ukongeza iindlela ezimbalwa zokufota kwiikhamera. Kwikhamera yangaphambili yefowuni bakhethe inzwa enye ye-8 MP, apho kuphuculwe khona.
Indawo yesivamvo somnwe weminwe ithembisa ukuba sisihloko sengxoxo phakathi kwabasebenzisi. Ayingenanga kwiscreen, njengoko ezinye iibrendi zenzile. Asikhange siyifumane ngasemva kwesixhobo. USony uzise le sensor yeminwe kwelinye icala lomnxeba. Isigqibo esingaqinisekisi wonke umntu. Nangona kuya kufuneka sigwebe ngokusekelwe ekusebenzeni kweenzwa zeminwe yemihla ngemihla.
Ibhetri, Inye ene3.330 mAh isetyenzisiwe. Ayisiyo ibhetri enkulu, kodwa ngokudibeneyo neprosesa enayo, ebonakala ngokusebenza kwayo kwamandla, ukongeza ekubeni nephaneli ye-OLED, edla ngokutya kancinci, kufanelekile ukuba ikwazi ukusebenzisa isiphelo esiphezulu imihla ngemihla.
Kwinkcazo yale Sony Xperia 1 akukho nto ikhankanyiweyo malunga nokwaziswa kwayo kwintengiso. Isiphelo esiphakamileyo siya kufumaneka kuhlobo olunye ngokwe-RAM kunye nokugcinwa. Ukukhethwa kwemibala kuya kubanzi ngandlela ithile, kukwazi ukukhetha phakathi komnyama, ngwevu, mhlophe nemfusa.
Siyathemba ukuba sinolwazi malunga nokuqaliswa kweemarike eziphezulu ngokukhawuleza. Akufuneki ukuba ithathe ixesha elide de kwaziwa ngakumbi ngokusungulwa kwayo kunye nexabiso layo lokuthengisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » I-Sony Xperia 1: Isiphelo esitsha sikaSony ngoku sisemthethweni